Lix Dal Oo U Soo Baxay Dheesha Koobka Aduunka Ee 2022 – Heemaal News Network
Faransiiska ayaa xasuuq 8-0 ah oo uu xalay u geystay Khasakhstan waxa uu ugu soo baxay Koobka Adduunka 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar, isaga oo noqday dalkii afraad ee qaaradda Yurub ah ee xaqiijista booskiisa.
Waddanka ku guuleysta Koobka Adduunka ayaa waqtiyadii hore si toos ah u iman jiray isaga oo aan isreeb-reeb soo gelin, hase yeeshee waxa la beddelay sharcigaas, waxaana lagu bilaabay Faransiiska in isaga oo haysta Koobka Adduunka ay haddana isreeb-reeb soo galaan.
Dalka kaliya ee aan isreeb-reebka gelayn ayaa ah Qatar oo martigelinaysa Koobka Adduunka oo ah mid taariikh cusub adduunyada u dhigaya oo la qabanayo xilli aan ahayn waqtigii hore loo ciyaari jiray ee bilaha June iyo July.
Bisha November ee sannadka dambe ayaa uu bilaabmi doonaa Koobka Adduunku, waxaana uu dhamaan doonaa December, waxaana hakad loo gelin doonaa horyaallada oo min 13 ciyaarood la dheelay.
Guusha weyn ee uu Faransiisku gaadhay xalay, waxa uu ugu soo gudbay koobka adduunka, hase yeeshee waxa kale oo iyaguna soo baxay xulka qaranka Belgium oo 3-1 ku garaacay Estonia. Waxaa ilaa hadda u soo baxay koobka aduunka lix dal oo kala ah, Qatar, Germany, Denmark, Brazil, France iyo Belgium.
AMISOM Oo War Kale Ka Soo Saartay Sida Loo Fulinayo Xukunkii Lagu Riday Askartooda
Heemaal May 4, 2022